ဆေးဝါးများ – Dawn ဆေးခန်း
ဆေးဝါး Access ကိုနှင့်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး
ကျနော်တို့ဆေးကိုစျေးကြီးဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်. အရုဏ်မှာ, ကျနော်တို့သေချာသင်တတ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးကုသမှုရဖို့လုပ်သငျနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒီစာမျက်နှာတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အသုံးဝင်သောတွေ့ပါစေခြင်းငှါအချို့အရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းကြ.
ကော်လိုရာဒိုမူးယစ်ဆေး Card ကို
အမျိုးသားဆေးဝါး Card ကို
RX ချွေတာသုံးစွဲ Plus အားကတ်
Walmart စာရင်းကိုထိန်းသိမ်းထား $4 ဆေးဝါးများ. ငါတို့သည်သင်တို့၏ရည်ညွှန်းဘို့မိမိတို့စာရင်း link တစ်ခုပေးထားပါပြီ.
$4 Walmart ဆေးညွှန်း
အနီးဆုံးဆေးဆိုင် Walmart ဖြစ်ပါသည်:
Walmart အိမ်နီးချင်းစျေးကွက် – aurora (Store ကိုကျဘျဆိုကျ)
10400 အီး Colfax ရိပ်သာလမ်း
ပစ်မှတ် – aurora (Store ကိုကျဘျဆိုကျ)
14200 အရှေ့ Ellsworth ရိပ်သာလမ်း, aurora, CO 80012
ပစ်မှတ် – aurora အနောက် (Store ကိုကျဘျဆိုကျ)
1400 S ကကျူးဘားစိန့်, aurora, CO 80012
ရှငျဘုရငျ Soopers (Store ကိုကျဘျဆိုကျ)
15109 အရှေ့ Colfax ရိပ်သာလမ်း, aurora, CO 80011